DEG DEG: Madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo ku xaniban garoonka Muqdisho, – XAMAR POST
By Mohamed Ahmed On Sep 22, 2019
War goor nasoo gaaray garoonka diyaaradaha Ee Magaalada muqdishu ayaa sheegaysa in Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ku xayiran yihiin garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Sheekh Shariif iyo wafdigiisa ayaa saaran diyaarad ku socota magaalada Kismaayo, oo dowladda Soomaaliya ay diiday inay halkaas ka duusho.
Sida aan xogta ku helnay diyaarada ayaa ku wajahan magaalada Kismaayo, waxayna wafdiga Sheekh Shariif uu hoggaaminayo ay doonayaan inay ka qayb galayaan munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Dowladda Soomaaliya ayaa goordhow soo saartay xayiraad cusub oo dheeraad ah, taas oo ku saabsan duulimaadka Kismaayo.
Hay’adda duulista rayidka Soomaaliyeed SCAA ayaa soo saartay amar ah in shirkad kasta oo u duuleysa Kismaayo inay soo weydiisato Xafiiska Hay’adda fasax duulimaad 24 saac ka hor.
Ma cadda in Sheekh Shariif uu saameeyey amarkan iyo in amarka uu soo baxay kadib markii la celiyey, ayada oo isaga loogu talo-galayo, waxaana ay u badan tahay in amarka uu dambeeyey.